DAINIK SANJAL VIDEO: कतार बाट आयो अर्को खुशी को खबर अब श्रमिकले काम करार अवधि सकिन अगावै कतार छोड्न पाउने सबै कतार मा बस्नु हुने नेपाली दाजु भाइ ले यो न्युज पढ्नु होला र शेर गर्नुहोला
कतार बाट आयो अर्को खुशी को खबर अब श्रमिकले काम करार अवधि सकिन अगावै कतार छोड्न पाउने सबै कतार मा बस्नु हुने नेपाली दाजु भाइ ले यो न्युज पढ्नु होला र शेर गर्नुहोला
अब श्रमिकले काम करार अवधि सकिन अगावै कतार छोड्न पाउने
कतारमा रहेका आप्रवाशीको प्रवेश,प्रस्थान र आवास नियमन गर्ने २०१५ को कानुन न. २१ का केही प्रावधान संशोधन गर्दै कतारका अमिर शेख तामिम बिन हमाद अल थानी ले बुधबार २०१७ को कानुन न. १ जारी गर्नुभएको छ । संशोधित नियमको अनुसार श्रमिकले रोजगार दातालाई खबर गरेको खण्डमा विदा, आपतकालिन अवस्थामा अथवा अरु कुनै कारणले कतार छोड्न अधिकार पाउनेछन् ।
त्यस्तै कामदारले आफ्नो काम करार अवधि सकिन अगावै पनि कतार छोड्न पाउने जारी भएको नयाँ नियममा थप गरिएको छ ।
यधपी रोजगारदाताले कुनै अवरोध गरेको खण्डमा कामदारले सिधै गमन पत्र उजुरी केन्द्रमा उजुरी दिनपाउनेछ । केन्द्रले उजुरी पाएको ७२ घन्टामा नै कामदारलाई कतार छोड्ने गमन पत्र प्रदान गर्नेछ । तर श्रमिक कुनै पनि अपराधिक क्रियाकलापमा समावेश भएको हुनुहुँदैन् ।
गमन पत्र उजुरी केन्द्र गत साल श्रमिक सम्बधि नयाँ कानुन लागु भएको एक दिन अगाडी डिसेम्बर महिनाको १२ तारिख स्थापना भएको थियो । आन्तरिक मन्त्रालयका कानुन मामिला समितीका प्रमुख ब्रिगेडियर सलिम सकर अल मुराइखी का अनुसार केन्द्रमा परेको उजुरीलाई समितीले तीन दिन भित्रमा सुल्झाउनेछ । समितीले पनि कुनै कारणबश उजुरी सुल्झाउन नसकेको खण्डमा भने श्रमिकले आन्तरिक मन्त्रालयमा पुन उजुरी गर्नपर्नेछ ।
के हो गमन पत्र उजिरी केन्द्र (EXIT PERMIT GRIEVANCES COMMITTEE) ?
कतार छोड्न चाहिने गमन पत्र (एक्जिट पर्मिट) पहिले आफु कार्यरत कम्पनी बाट लिनु पर्ने व्यबस्था मात्र थियो भने अब आँफै अनलाईन बाट लिन पनि सकिनेछ । तर आफु कतार छोड्ने बारे आफ्नो कम्पनी लाई खबर भने गर्न पर्ने हुन्छ ।
यधपी कम्पनीले गमन पत्र दिन नमानेको खण्डमा गमनपत्रका लागि श्रमिक आँफैले सिधै उजूरी दिने केन्द्र नै (एक्जिट परमिट ग्रिभानसेस कमिटि) हो ।
यो अनलाइन, प्रहरी चौकी वा सम्बन्धित सरकारी कार्यालय बाट निबेदन दिन सकिनेछ । समिती ले उक्त निबेदन लाई ७२ घण्टा भित्र नै सम्बोधन गर्नेछ अझ आपत्कालिन खण्डमा यस्ले अझ छिटो काम गर्नेछ ।
गमन पत्र उजूरी केन्द्रले कसरी काम गर्ने छ त ?
यस समिती आन्तरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा MADSLA का उच्च पधाधिकरी हरु बाट बनेको समिती हो । यहाँ श्रमिक को उजुरी पर्ने बित्तिकै यसले श्रमिक को कम्पनी मा खबर गर्नेछ । कम्पनीले गमन पत्र दिन नमानेमा गमन पत्र अश्विकार को बारेमा सोध्पुछ गर्नेछ । श्रमिक र कम्पनीको बिगत का गतिबिधी लाई निग्रानीमा राख्नेछ । श्रमिकले बिगत मा कुनै अपराधिक कृयाकलाप वा कतार मा श्रृण नभएको खण्डमा भने यस्ले स्वत्त गमन पत्र दिनेछ । अझ श्रमिक लाई आपत्कालिन परेको खण्डमा पनि आवश्यक कागज पत्र मिलाई यस समितिले गमन पत्र छिटो दिनेछ ।
याद राख्नुहोश, तपाईंको कम्पनीले एक्जिट पर्मिट नदिएको खन्डमा मात्रै उजुरी गर्नु होला । पहिलाको जस्तै तपाईंको कम्पनीले पनि एक्जिट पर्मिट दिनसक्नेछ। कम्पनीले पर्मिट दिदा छिटो र तपाईंहरु बिचको सम्बन्ध राम्रो रहन सक्छ।
Posted by Dainiksanjalvideo at 6:14 PM